Yako email rondedzero chidimbu chinotamba yakakosha basa mukubudirira kwechero email mushandirapamwe. Asi chii chaungaite kuti chinhu chakakosha ichi chikushandire panguva yezororo - inguva inobhadhara zvikuru yegore kune bhizinesi rako? Kiyi yekuparadzanisa dhata ... saka kutanga kutora iyo data mwedzi mwedzi yezororo isati yakwana inhanho yakakosha inotungamira mukubatana kukuru kweemail nekutengesa. Heano akati wandei
Chipiri, August 10, 2021 Chipiri, August 10, 2021 Douglas Karr
Vatengi vanotenga muchitoro chepamhepo kubva kukomputa yako yekumba, shanyira peji rezvigadzirwa pane imwe saiti pahwendefa, shandisa smartphone kutumira nezvazvo pasocial media wobva wabuda kunze uye unotenga chigadzirwa chakafanana panzvimbo yekutengesa iri padyo. Yese yega yekusangana uku kunobatsira kugadzira hwakazara mushandisi chimiro, asi iwo ese akasiyana zvidimbu zveruzivo, zvichiratidza zvakasiyana. Kunze kwekunge zvabatanidzwa, zvinoramba zviripo